Food uye zvinwiwa, Chikuru kosi
Muitiro kudya kunokosha zvikuru kuti munhu wese. Kunosanganisira ose kunyatsosvinurira, zvisinei chokuita havi. Zvakakosha kuwana kwete chete kuravira, asiwo aesthetic kufadzwa kudya, ndokusaka kubva magadzirirwe midziyo uye tableware kunoenderana chaizvo panguva yokudya kana chisvusvuro.
Table nokuzvibata ndiyo mitemo iyo munhu anogona mukudzidzire zivo nyore pamusoro nedanho pakunamata, kunyoresa uye zvokudya ndiro. Kokutanga kutaura nokuzvibata regumi namasere remakore, zvakanga ipapo kuti French dzimba dzakatangwa dzimwe mitemo kuchengetwa kusvikira zvino. Munyika yanhasi, mitemo iyi vawedzerwe uye vaisanganisa, asi kwete kuregwa.
Chinhu chokutanga unofanira kungwarira vaya vakasarudza kudzidza yokudyira nokuzvibata, ari kutevedzana kwezviitiko kudyisa vaenzi ndiro.
Cold nezvikafu zvishoma.
Hot nezvikafu zvishoma.
Ndiro rokutanga (soups, soups).
ndiro Main (hove, nyama etc.).
Ichi hurongwa chaiwo anozivikanwa kuti zvinenge zvose, saka kurangarira hazvina kuoma.
Kana akauya kuti kushanya uye kwete chokwadi apo kutanga kudya, kutanga nezvikafu zvishoma ne shoma macalorie. Haufaniri vachidyisa salads, vanofanira kusiya nzvimbo pakati huru mapoka uye dhizeti. Regai vanoramba kugamuchira chero zvokudya, saka unogona chakagumbura hositesi. Edza chiduku chimedu, kana iwe usingagoni kuidya zvose. Cherechedza Dining Etiquette ari mubato, uye kumba.
Madzimai epamusha anofanira kuziva zvose mitemo patafura nokuzvibata. Chokutanga, yeuka kuti kudya zvose zvinofanira kuva zvikuru yepakutanga, kudzokorora haabvumirwi chero ruvara, kwete mazita ingredients. Uyewo, regai pasi mbiri fried kana vaviri chehove ndiro. Rangarirai zvokudya vakakokwa mvura chicherwa pamberi kudya. Mvura inogona kutsiviwa muto kana nevamwe vasiri doro zviri nyore. Pashure mvura patafura hwakaratidza zviyo nezvikafu zvishoma, tositi.
Pane mumwe kutevedzana kwezviitiko nerubatsiro ndiro siyana. Nokuti wechipiri ndouyu: hove, nyama, shiri, miriwo uye howa. Feeding inopisa nezvikafu zvishoma ndiro zvakafanana. Boka rokutanga akashumira anovava madhishi sauces (kana zvakakodzera) uye akabika. Panoperera manheru tafura yabviswa mamwe nezvirongo dhizeti. Sezvo vaenzi vari akabayira dhizeti drink tii, but kana kofi. Somunhu dhizeti kunogona cake, aizikirimu, muchero Salad kana coctail. Kuwedzera ndiro izvi pamusoro petafura, vakaisa zvihwitsi, mabhisikiti, michero uye chizi.
Cherechedzai inofanira kubhadharwa kuti doro pamabiko. Kune vamwe mitemo mubatanidzwa zvokudya uye zvokunwa, somuenzaniso, waini chena vane nzvimbo zvinobata pamwe chizi, hove uye magakanje. Red waini rakakodzera yehuku madhishi, veal uye gwayana. First vakashumira akaoma waini, zvino inotapira. Usakanganwa pamusoro kuwedzera dhigirii mutemo. Rega kupa vaenzi munhu whiskey pakutanga wechikafu.
Table nokuzvibata harisi chete mitemo kushumira madhishi asiwo nzira inokosha kuzvibata patafura. Tose tinoziva kuti chivhariso zvinofanira kuchengetwa noruoko rworuboshwe nebanga uye chipunu kurudyi. Asi iwe unofanira kuziva uye sei kuti zvakakodzera kushandisa mamwe Forogo, Banga Nechipunu. Etiquette atipe kubva pauduku, asi, zvinosuruvarisa kuti vakawanda havasi nezvemadzimambo mitemo yaro uye pakukwegura.
Kungochinja zvokudya ndiro zvavo vanoda spatula yavo chaiyo kana forogo chete vakagoverana namano. Maoko chimwe dhishi anobvumirwa kutora chingwa chete, michero uye zvihwitsi. Men havafaniri kukanganwa kuti kutarisira wemadzimai, vaifudza nezvikafu zvishoma uye kunwa. Zvinonzi mwero vazvibate patafura, ndiro havasi achirira, kwete whisking dzinodya mafufu pasi uye tablecloth. Usakanganwa pamusoro chii ndiro kune zviri kuitirwa. Somuenzaniso, Porridge uye soups vari vakashanda diki uye sandara makeke uye chingwa zvakadzama mahwendefa. Panewo yakananga mutemo nokuisa mano patafura. mapanga All uye nezvirongo aisa panze kurudyi uye akasiya forogo. Magirazi vari ndiro zvakarurama pamberi mashizha, uye dhizeti mano akaisa pamberi mahwendefa.
"Kesari" (mupumburu) - zvinonaka uye nyore
Extra - mhandara - mhandara namafuta pamusoro hwakanakisisa
GMO Chii uye nei "kudya"?
Cream "Peipsi": ruzivo pamusoro mugadziri, chigadzirwa musanganiswa uye yakanakisisa Quick
Blackthorn bheri: kubatsirwa uye pokukuvadza
Zvechokwadi zviyo vana?
Zvinyorwa zvebharikiti zvepakati peRussia. Apricot mukatikati yeRussia
Five nzira afadze pachako uye shamwari dzako
Sei kudzidza kukurukura
Matongero ari chikamu 1 Chikamu 161 yemutemo weCriminal Code: mhinduro. Art. 161 yemutemo weCriminal Code: ugororo
Dana Sideros: mapikicha, Biography, okugadzira zvinhu nyanduri
Zvakachinja okunze: sei kwavari muviri wedu?
Restaurant "Carrot Bunny" Samara: Address, menu, wongororo
Mari Personal uye nevatengi mamiriro
Sei mutsva MHI nehurumende. Kutsiva OMC nomutemo kuti itsva. Fanira chitsividzo MHI mitemo
How kubika rimwe mackerel pasión muchoto mune foil
Anatoly Yefimovich Kasheparov, muimbi: Biography, mhuri, basa. Via "Pesnyary"
Salad muchikurumidza; ndiyo nguva kuedza!